Indlu yodaka ngaseMlambo|250 m Trek| Jibhi - I-Airbnb
Indlu yodaka ngaseMlambo|250 m Trek| Jibhi
Ifama sinombuki zindwendwe onguShanu
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uShanu iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
• Yiza, uhlale kwindlu yodaka esecaleni komlambo eJibhi.
• Kukho amagumbi amabini okulala, iibhedi ezimbini, kunye negumbi lokuhlambela elicoceke ngokugqibeleleyo, lale mihla kwigumbi lokulala ngalinye. Uzakuhlala kumgangatho ophantsi kwindlu enamagumbi amane okulala.
• Ikhitshi eliqhelekileyo elixhotyiswe ngokupheleleyo.
• Kukho izitiya zama-apile kufutshane.
• Hamba uye emlanjeni, oziimitha ezili-150 kude
• Umosi wenwele
• Isidlo sakusasa
• Umlilo ovuthayo, ohlawulekayo
• Ukuloba, kuyahlawuliswa
•Indawo yokupaka ecaleni kwendlela yi-250m ukusuka kwindawo, kufutshane necafe. Kuya kufuneka uhambe umgama ozimitha ezingama-250 ukuya kufika kule ndawo.
• Intle kakhulu kwaye ikhululekile.
• Amagumbi okulala amabini aneebhedi ezimbini.
• Indawo yokuhlala apho unokusela iwayini, umamele ukumbombozela komlambo.
• Amagumbi okuhlambela ale mihla
• Idesika onokuthi uyibhale.
• Kufuphi nomlambo
★Indlu encinci ikwimizuzu emibini yokuqhuba phambi kwemarike yaseJibhi.
★Indlwana ikwifama entle, inamabhoma ama-apile ngeenxa zonke.
★Umlambo ungaphantsi kwendlu yakho
★Uya kuhlala kufutshane nomhlaba nazo zonke izinto eziluncedo zale mihla.
Umbuki zindwendwe ngu- Shanu
•Umnini-mhlaba kunye nenkosikazi baya kuhlala bekho kwiindwendwe.
•Uya kufumana nantoni na oyifunayo kwimarike emnyango wakho.
•Uya kufumana iimpahla zakho zihlanjwe, zomiswe kwaye ziayinwe ngexabiso eliphantsi.
•Siza kwenza ibhonfire ngesicelo.
•Sipheka ukutya okunencasa kweHimachali.
•Sihamba neendwendwe kuhambo olufutshane, nanini na sinako.
•Sikwalungiselela iiteksi ngexabiso eliphantsi.
Ukusela kunye nokutshaya kuvumelekile, kodwa uxanduva kakhulu. Umculo ongxolayo ungavunyelwa naphi na edolophini emva kwentsimbi yesibhozo ebusuku.
•Uya kufumana iimpahla zakho zihlanjwe, zom…